दोस्रो दाङ साहित्य महोत्सव असोजको पहिलो हप्ता–Samacharpati
जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि सबै सेवा बन्द
नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५०० नाघ्याे
नेपाल टेलिकमले गर्यो देउपुर डाँडामा रहेको मोवाइल टावरको स्तरोन्नति
पोखरा महानगरद्वारा दुई ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान
काठमाडौं, २६ भदौ । उदाहरण समूह नेपालले असोजको पहिलो हप्ता दाङमा ‘दोस्रो दाङ साहित्य महोत्सव’ गर्ने भएको छ । असोज १, २ र ३ गते हुने महोत्सवमा देशभरिका करिब ३ दर्जन साहित्यकारले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ ।
समूहले अघिल्लो वर्षदेखि महोत्सव आयोजना गर्न थालेको हो । यस पटकको साहित्य महोत्सव भने भर्चुअल हुने महोत्सवका संयोजक विष्णु सन्न्यासले जानकारी दिएका छन् । ‘यस वर्ष पनि हामीले दाङको भूमिमै उभिएर देशभरिका लेखक, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ उभ्याउने भनेका थियौं ।
तर, विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै अनलाइन गर्न लागेका हौैं,’ उनले भने । दोस्रो दाङ लिटरेचर फेस्टिभलमा ११ वटा सेसन सञ्चालन हुनेछन् । दाङ थारु समुदायको थातथलो भएकाले असोज १ गते पहिलो सेसन नै थारु भाषाको कविता विशेष ‘हमार माटि, हमार कविटा’ बाट महोत्सव सुरु हुने संयोजक सन्न्यासले सुनाए ।
महोत्सवमा संस्कृतिविद् प्राडा. जगमान गुरुङ, लेखक सञ्जीव उप्रेती राजन मुकारुङ, भूपाल राई, राजनीतिज्ञ गगन थापा, विद्या भट्टराईदेखि साहित्यका पछिल्लो पुस्ताको समेत उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ । असोज १ गते महोत्सवको पहिलो सेसन ‘हमार माटि, हमार कविटा’ ११ बजेदेखि सुरु हुने छ । सेसनको सहजीकरण साहित्यकार छविलाल कोपिलाले गर्नेछन् ।
सोही दिनको १ बजेदेखि सुरु हुने दोस्रो सेसन ‘झण्डाको राजनीति’मा प्राडा जगमान गुरुङ र भूपाल राईबीच बहस हुनेछ । सेसनको सहजीकरण गुरुङ सुशान्तले गर्नेछन् । महोत्सवको पहिलो दिन ३ बजे ‘पर्यटनमा दाङको अनुहार’ सेसन हुनेछ । पहिलो दिनको तेस्रो तेस्रोे सेसनमा दाङको पर्यटकीय क्षेत्रबारे घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी, पर्यटनविद् प्राडा गोविन्दराज आचार्य र जीतेन्द्रमान नेपालीले वक्ताको भूमिका निभाउनेछन् ।
उक्त सेसनको संयोजक डा. शिवकुमार सुवेदीले गर्नेछन् । सोही दिनकै अन्तिम सेसन साँझ ५ बजे हुने भएको छ । ‘कोभिड १९ ः भ्रम र यथार्थ’ विषयक सेसनमा प्राडा प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनेछन् । महोत्सवको दोस्रो दिन असोज २ गते शुक्रबार पहिलो सेसनमा राप्ती क्षेत्र वरिपरिको सिनेमा कथाबारे छलफल हुनेछ । ११ बजेदेखि सुरु हुने सेसन ‘सिनेमामा आदिवासी कथा’ मा अनिल बुढा र छविलाल कोपिलाबीच छलफल हुनेछ । छलफलको सहजीकरण विष्णु सन्न्यासले गर्ने भएका छन् ।
सोही दिनको दोस्रो सेसन ‘अक्षरमाथि भ्रष्टाचार’ हुनेछ । दिउँसो १ बजेदेखि हुने लेखक, सम्पादक, प्रकाशकबीचको बहसलाई मन क्षेत्रीले सहजीकरण गर्नेछन् । दोस्रो दिनको अन्तिम सेसन ‘डायस्पोरा साहित्यभित्र सकस’ दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रवासमा रहेर लेख्नुका सकसबारे चन्द्र गुरुङ, गोविन्द गिरी प्रेरणा, हाङयुग अज्ञातबीच कुराकानी हुनेछ । कुराकानीको सहजीकरण कुमारी लामाले गर्नेछिन् ।
महोत्सवको अन्तिम दिन असोज ३ गते पहिलो सेसन उदाहरण समूह विशेष हुनेछ । ११ बजेदेखि सुरु हुने सेसनमा समूहमा आबद्ध अभियनताले आआफ्ना कविता सुनाउने छन् । ‘उदाहरण समूह’ सेसन विष्णु सन्न्यासले सहजीकरण गर्नेछन् । सेसनमा दर्जन बढी कविले आफ्नो कविता सुनाउने छन् ।
सोही दिनको दोस्रो सेसन ‘कोभिडपछिको विश्व’मा कोभिड महामारीको अन्त्यपछि विश्वको अर्थ, राजनीतिबारे बहस हुनेछ । बहसमा वक्ताका रुपमा प्राडा सञ्जीव उप्रेती, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, नेकपा नेत्रृ विद्या भट्टराईबीच बहस हुनेछ । बहसको सहजीकरण दोभान राईले गर्नेछिन् ।
शनिबारको तेस्रो सेसन नेपाली मिडियामाथि छलफल हुने भएको छ । दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु हुने ‘महामारीमा मिडिया’ सेसनमा वक्ताका रुपमा रामकृष्ण रेग्मी, वसन्त बस्नेत र फातिमा बानु उपस्थित हुनेछन् । सेसनको सहजीकरण सागर चन्दले गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई मनोनीत नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि वी पी काे धर्ना
दुर्घटनामा परेका सदस्यलाई युथ कम्युनिटी क्लव (Ycc Nepal) को सहयोग
झापा मेचीनगरमा ”मेची क्राउन” पाँचतारे होटल सञ्चालन
अवरुद्ध बनेको ढोरपाटन को बोबाङ सडकखण्ड एक महिनापछि सञ्चालनमा
कोरोना भाइरसविरुद्धको रसियन भ्याक्सिन नेपालमा भित्र्याउने
जेष्ठ नागरिकका लागि सहयोगी बन्दै सेवा केन्द्र
गण्डकी प्रदेशमा १९ जना कोरोना संक्रमित थपिए सँगै संक्रमित संख्या ३९४० पुग्याे
कास्की–२ मा मतदान जारी
चलचित्र शिवम् असोज १७ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा, ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
तीज गीत “रुना बरी लै” सार्वजनिक